Leencoo Lataa, Farra fi Rimma qabsoo bilisummaa oromoo ti. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsLeencoo Lataa, Farra fi Rimma qabsoo bilisummaa oromoo ti.
Leencoo Lataa: Is still Amanuel Mental Hospital in Finfinnee is giving service? please help is needed for this guy!!
Leencoo Lataa, Farra fi Rimma qabsoo bilisummaa oromoo ti. Leencoo Lataa isa bara 1992maa WBO hiikkachiisee mooratti naquudhaan ficcisiise mi’eefateetu har’as arraba isaa lakkuu fi summii sanaan “WBOn hin jiru yoo jiraate ammoo hidhannoo isaa hiikkachuun dirqama” jedhee Radiyoo habashootaa Ahadu jedhamtu irratti dubbate.
Leencoo Lataa warroota dhaaba ABO kana bu’uuressan keessaa tokko haata’uyyuu malee bara jireenya isaa guutuu hamma dhaaba ABO kana keessa turetti hamma dhaaba kanaaf bu’aa buuse irra kan inni miidhee fi quucarseetu irra caala.
Leencoon seenaan isaa dhaaba ABO kana keessatti qabu seenaa diigaa fi quucarsuu ture. Isa inni gaarii hojjete irra kan inni balleessetu irra caala. Leencoon Lataa hamma bara ABO keessa tureetti ABOf “RImma”ture. Hogganoota olaanaa dhaaba ABO keessa taa,ee hoogganoota dhaabicha shiraan xaxuudhaan yaada Itoophiyaanistummaadhaan moromoree keessa keessaan nyaatee dhaabni kun akka hin guddanne sammuu irraan gadi quucarsaa ture.
Har’a gaafa dhaabichi “waggaa 40ma guutuuf shira kee dandeenyee si baannee obsinee har’a geenyeerra garuu ammoo obsi daangaa qaba ammaan booda ni gaha” jedhee dhaabni ABO of keessaa tufee darbatu, kunoo warra diinota saba oromoo waliin waliigalee shira olola rakasa WBOn gaachanni saba oromoo hidhannoo isaa hiikkachuu qaba jedhee ololuu jalqabee jira.
Kanaaf namtichi bara dheeraaf KAANSERII qabsoo bilisummaa ummata oromoof ta’e kana bifa danda’ameen ummati oromoo dura dhaabbachuu qaba. Akkasumas jara aangoo hahaarcaatuu argachuuf jecha dubbii laaqaa oolan kanas of keessaa tufee baasuu qaba“Aggarotti hirriyaa koo na jallaa ajjeste agazin. Xahaa Kadir jedhama. ‘Haroomsi haaran nu bira hin genye; samamaa jirra,’ jechun hiriira nagaa ba’ani turani, torban kana.”
ኣቶ ለንጮ ለታ ስለ ኦነግ ሰራዊት ትጥቅ ፍች ገለጻ Kennaniiru ። Silaas #Hootelakeessaatti nujalaa irraanfatamaniiru yoo akkasumattillee isaan ኣስታዋስኔን malee…!
Mee barreeffama aadde Siinbone Amiikoo kana faana naaf bohaaraame!
Kabajamoo MM Dr. Abiy Ahmed
Kabajamoo PMNO Dr. Lammaa Magarsaa
HD ABO Obbo Daawud Ibsaa.
Dhimma waraana ABO hiikachiisuu ilaalchisee iciitiin isin gidduudhaa ba’uu hin mallee laafina keessanirraa kan ka’e gadi ba’ee halagaafii masaanuu dibbee rukuchiisaafi daankiiraa sirbisiisaa jira. Nuti uummanni Oromoo wanta akkasii isin gidduudhaa dhaga’uun baay’ee nugaddisiisa. Haamlees nucabsa. Bakka kaleessa turre deebinee akka yaadannee siqiiqnu nutaasisa waan ta’eef hatattamaan hiikuu yaalaa. Isin gidduutti afaan obbolummaa malee afaan akka Obbo Kaasaahuun Goofee jedhamu dubbate sanaa dhaga’uu hin feenu. Walitti dhaadachuu bira darbinee jirra jennee gammadaa utuu jirruu kana dhaga’uun unuuf du’a dha.
Akka dhala Oromoo tokkootti dhimmi kun waan na’ilaallatuufi maatiinkoo kan itti wareegame waan ta’eef garee lamaaniifuu akka dhuunfaakootti waanan jedhun qaba.
Hundumaa dura Waaqa Oromoo tokkicha isa yaroo sana isin gidduu ture sodaachuufi ofirratti ilaaluun isa gaafa Asmaraatti wal argitanii mariyattanii irratti walii galtan hojiirra Oolchaa.
Itti aansuun Obbo Daawud Ibsaatiif:-
Obbo Daawud har’a utuu hintaanee utuu rifeensi sirratti hin addaatinan ijoollee ta’een sibeeka. Goota zinnaarakee mudhiitti hidhattee yeroo adeemtu akka shimala dhidheessa keessaa isa solooloo shaxee turtee sanaa. Umuriikee ijoollummaa sabakeef jettee wareegde sirriittan beeka. Atis nabeekta. Ilaa har’a waanan siin jedhun qaba nadhaga’i.
Yaroo ABOn qabsoo jalqabe waa lama karoorfateeti.
Inni tokko sabasaa sammuun bilisoomseefi of barsiisuun sammuu isaa hidhachiisuu dha. Afaan isaa Addaa isaafi Eenyummaa isaa beekee akka eeggatuufi kunuunfatu. Afaan isaatiin akka baratu, barsiisuufi barreessuu dha. Daangaa Oromiyaa akka beekuu, beekees akka eegatu dha.
Inni lammaffaa qabsoo hidhannootiin sirna koloneeffataa cabsuun Oromiyaa bilisoomsuun Oromoo abbaa biyyaa godhuu dha. Innin lammaffaa irratti eeree bara dheeraa dhaaf itti dhama’amee jira. Lubbuun qaqqaaliin itti wareegamee jira. Maatiin hedduun itti miidhameera. Yoo hin dubbanna jenne dubbannee hin fixnu. Gabaabsuuf jecha Irra darbuu wayya. Utuma kun hundi ta’uu guyyaa har’aa kana geenyee jira.
Itti milkoofneerramoi itti hin milkoofne jechuuf hanga xinnoo yoo itti milkaa’ameera ta’eyyu harka caaluun itti hin milkoofne. Attamiin itti hin milkoofne yoo jenne akka yaadame mootummaa koloneeffataa waraanaan kuffisanii aangoo qabachuun tasumaa hin danda’amne. Maaliif hin danda’amne yoo jenne sababaa hedduu lafa kaa’uun hin danda’ama. Fakkeenyaaf:-
1ffaa. Rakkoo dhaaba ABO keessatti walii walii isaanii gidduutti uumamuun bakka hedduutti hiramuufi faffaca’uu.
2ffaa. Rakkoo alaa karaa mootummaa biyyattii mudateefi maqaballeessii
3ffaa. Rakkoo dinagdee.
4ffaa. Biyya ollaatii fira waraana namaa qubsiusu dhabuu
5ffaa. Labsii shororkeessummaa ABO irra ture.
6ffaa. Jijjirama haala siyaasaa yaroon kun nama gaafatu fi kkf.
Kanaafuu karaa qabsoo hidhannoo gara fuulduraattis milkaa’uun hin danda’ama inni jedhu shakkii keessa waan nama galchuuf itti yaadanii murtoo irra ga’uun barbaachisaa dha. Isan lakkobsa jalqabaa irratti eereenoo ABOn milkaa’eeraa? Isa jedhuuf eeyyee milkaa’ee jira. Oromoon yaroo ammaa sadarkaa mirga isaa sirriitti eegsifatu irra ga’eera. Kanaaf wabiin qabsoon waggoottan afran darban ga’aa dha. Kana booda Oromoo dudduuba hin deebi’u. Kun hundumtuu qabsoo ABOn ganama manaa ba’eefiin argame dha.
Team Lammaa kan dhalche qabsoo kana. Dr. Lammaa kan dhalche qabsoo ABO dha. Dr. Abiyyiin kan dhalche qabsoo ABOti. Qeerroo kan dhalche qabsoo ABO dha. ABOn hojii isaa xumuree jira. Akkakoof yaroo itti taa’ee firii qabsoo isaa ilaalee duddubaan gorfachaa jiraatu dha.
Dr. Lammaa Magarsaa fi Dr.Abiy Ahimad:-
Isin lachuu ilmaaniifi bu’aa qabsoo kanaati. Isininjaalladha. Akka agartuu ijakootittin isin sassata. Obbo Daawudiifi qabsaa’otni ABO abbootii keessani. Isinii dhalchaniiru. Isiniinis qabu. Isiniin abdataniifi isin irratti ofgatanii biyyatti deebi’ani. Biyya ormaatti itti dhaqxanii haasofsiiftanii biyyatti galfachuun keessan baay’ee nama gammachiisee jira. Hojii dinqi hojjettani. Waaqayyo isin ha’eebbisu.
Dhumarratti kanan jechuu barbaadu akka bareechitanii jalqabdan bareechaatii xumuradhaan jedha. Qilleensi isin gidduu hin seenin adaraa. Ijoollee gadi baatee midiyaa hawaasaa irratti gadi babaatee icitii zakazaktu kana to’adhaa. Rakkoo keessan gola Oromiyaa keessatti hiikkadhaa.
Waaqxi Oromoo isin haagargaaru.
Hunda keessaniyyuu waluma qixxeen isin jaalladha.
Oloolli gàmaàgamànààñ itti deemaa ture kabajà Qabsoo isaan kaleessà itti dhama’aniif jechaa irràa qolachaa turre,har’à asgalàgalanii dhimma isaan hin ilaalannee keessà yeroo waan hin hubanne ykn beekaa dubbii dabsudhaañ Jaala isaanii duriitti baaltii FB iratti daà’imni gaggeessitu fuudhanii Miidiyàa Habashaaratti yeroo haasa’an nan qaana’e!
Nàmni yoo waa hojjechuu dadhabe kabajà isaanii kaleessaa eeganii taa’unuu beekumsa. Habashaa gammachiisuuf moo ODP tumsuufi? Obbo #Leencoo Lataan dhaaba mataa isaanii nama qabanidhaODF maarree egàa dhimmi waldhabbii ABO fi ODP Mootummaa Dr.Abiyyi ilaallata.
Dr.Abiyyi dhimma kanaratti yaada araaraa dubbàchaa ture.
Maarree Obbo Leencoon Jaarsa biyyaà ta’anii ABO fi Mootummaa gidduu dhaabàchuurra WBOn haa hiikkatu fi oloolà Jaal.Daawud iratti deemsisuun isaanii nàma dhiba! Hamma yoonaa bakkuma jiran kan Uummanni Oromoo hin beekne dubbii jallinaaratti as ba’anii yaada gatantaraa FB irraa sassaabame dubbachuu seenaa fokkisaa hojjechuudha.
Silaa Obbo Leencoon akka hogganaà qabsoo bara dheeraatti maatii qabsaa’oota irraa ajjeefame Oromiyaarra deemanii dubbisuu fi Oromoo daangaa irraa ajjeefamaa jiruuf dhibbaa gochuun furmaanni akka dhufu gochuu qabu tare.Diina qabsoo Oromoo biràtti of mi’eessuu fi of agarsiisuuf ta’eewwaan akkasitti hirmaachuun sabuma keenyà miidha.
Bàra Uummànni Ethiopia guutuu hidhatee Oromiyaatti roorrisaa jiru kanatti kan qabsoo Oromootti sum’ii nàqaa ture hundi akka Oromoon cabee gabrummaatti hafuuf iràtti hojjetu!
Bàayyeen gàdde haasaan #Leecnoo fi Dr.Abiyyi wal faalleessa! Dave Abdiwaaq
Just to respond to your mockery, the youth (Qeerroo) you are referring to, unless of course you are too disoriented to notice, were picking the Oromo cause (hiree ofii offiin murteefachuu) that you abandoned and run. They OLF were where they are now (everywhere in Oromia, including you native village). They were reconstituting from the demise your agreement with Meles caused them when you ordered them to defenseless camps in 1991. They were in the jungles of Oromia fighting with the TPLF, and in the deserts of Eritrea working on how to give back Oromos what belongs to them. Let’s now ask where you were while they were doing all these. Bargaining with the TPLF which hotel is to be booked for you at the expense of the tax paying poor.
I do not mind you having an opinion different from mine when it comes to the OLF; however, I admit that I find it hard to tolerate anyone who bashes a) Dawud Ibsa or his colleagues, and b) those brave, determined and selfless Oromo kids who under the leadership of Dawud Ibsa, brought us to where we are today. The average person in your home village would tell you that the OLF was there with them. Let’s not forget, if it were not for them, you would not be in the hotel where you are today. Please get help!” Bedassa Tadesse
Haaromsi gaaraa #Aggaaroo qofa otoo hin taanee caasaawwan godinaa, aanaa, magaalaa fi ganda hunda bira hin geenye jechuun ni danda’ama. Kuni gaaffii waloo uummata bal’aa waan taheef waan furmaata waliigalaa barbaadu dha. Ammaaf waraabeeyyiidhaaf karaa saaquu hin barbaachisu. Warri Aggaaroo fi bakkoota biroos kan gaaffii qabdan obsaa fi abshaalummaadhaan rakkoowwan jiran hunda irra aanuu qabdu.
Abbichuun karabaatii sirreessaafii jira. Style uffannaas ni beeka, puushaaphiis ni hojjenna
G7 Galma Abbaa Gadaa Adaamatti Walgahii Saganteeffate jechuun qoosaa natti fakkaata. Dura yakka Oromoo fi Ummata Ethiopia irratti raawwataniif gaafatamuu qabu.
Dubbii Obbo Leencoo Lataa dhimma hidhannoo Oromoo ilaasisanii dubbatan kun isaaniif qaaniidha. Qaaniin isaanii garuu nibaayyate. Naqa tokko Oromoo gurguran; lammata irratti dhaaba Oromoo bakkeetti gataniidhiisanii jirenya isaaniif karaa falatan. Sadaffaa irratti G-7itti ofgurguran. Arfaffaa qorra Noorway baqatanii galuuf dhimma polootikaa Oromootti qabachuun biyatti deebi’anii. Kun hunduumaa sabi Oromoo akka waan hinbeekinnee callisee dhiifnnaan ammammoo ABO Media ormaa irratti hamatu. Isaan mataa gatan yoo ta’e mana yaalii mataatti geessuu ykn waan dubbatan yoo hinbeekanne ta’e firri maaf hingorsu. Gochaan isaanii hunduu qaaniin guutudha! Jaarsa qaanii!